Ingqomi 4 - izindabazokubhebhana - peperonity.com
peperonity.com » Sites » izindabazokubhebhana » Ingqomi 4
Ingqomi 4 - izindabazokubhebhana
Ingqomi 4Lapha endlini sekunuka igolo nomthondo.Angibhebhile amadoda ami.Omunye ungichamele egolo.Omunye wangichamela engquza ngemuva.
Bangichamele bengibhebha sengisemoyeni.UElvis noSifiso.Banele baqede ukuchama bangibeke phansi.Phela omunye ubengidla ngaphambili omunye ngemuva simile mina ngizithandele ngemilenze ngaphambili ongemuva engibambe izinqe ezipetulele ididi lami elibhebha.
Banele bangibeke phansi bathi ukudlalisa bathintithe imithondo yabo.'Oh sifebe sethu!'kunanelana abazala abangamadoda ami sebengibhebhile.
UElvis athathe i''phone''yami avule ama"sms" ami.'Kufanele sazi konke manje ngawe sifebe sethu.'Ananele uSifiso.'Impela mzala bengingazi ukuthi ngibhanqwe nawe!'
Ukuvula ifoni yami ngivele ngazi ukuthi kuzovela amanye amahlazo okuba ingqomi kwami.Empeleni amahlazo okufeba nokuba isifebe.Ngoba bengangibulalanga namuhla bevele bangibhebha kanyekanye angisenandaba.Vele ngiyisifebe sabo.
'Awu!Awu!Awubheke mzala ama''sms"amangaka aphuma naya kwamanye amadoda!'Kubabaza uSifiso.'Awu uyisifebe ntombazane!'kusho uElvis ngelokudinwa.Ngivele ngilume udebe lomlomo lwangenzansi.I"pride"yami ivele iphele nya.Bekumnandi ngibhejwa kodwa angikaze ngihlazeke kanje!Ngizizwe ngilula.Ngiwuzwe kahle umphumela wokuba isifebe ulahlekelwe isithunzi.
Sebengibuza ngendoda nendoda ukuthi eyaphi,ingidla kanjani.Nami sengiyacula ngisho konke.Ngisho abanamapipi amancane.Abangakwazi ukubhebha.Amaqhude asheshe achame.Abanemithondo emikhulu abangakwazi uku"romensa"abavele bayishutheke nje kubebuhlungu ingquza.'Ngiyaxolisa zithandwa zami ngizobashiya bonke.'Babuze ngabo ukuthi ngizobashiya yini!'Ningibambile zithandwa zami,mangibe isifebe senu.Ngidliwe yini kuphela.Proceed to 'Iphutha likaNgomane 2'Back to 'Esitolo sikababa'izindabazokubhebhanaSend to a friendVote for this siteAuthor: Izindaba zokubhebhanaMessage to Izindaba zokubhebhanaOffer friendshipJust visitedAdd to favouritesMy favouritesReport pageTopicsFlirt & Datingarvindssitm.peperonity.comkhankimagifamily.peperonity.com